Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): မြန်မာ့ရိုးရာရေကစားမဏ္ဍပ် ( Hukawng Tanai ,Kachin state ) သင်္ကြန်အကြိုနေ့
at 4/13/2018 09:03:00 AM
တပ်မတော်မှ ကေအိုင်အေ ဌာနချုပ်အား စတင် တိုက်ခိုက်ပြီ
ယမန်နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီ မှ စတင်ပြီး
ကေအိုင်အေ ဌာနချု ပ်ရှိရာ လိုင်ဇာ နှင့်
ဟူးကောင်း ချိုင့်ဝှမ်းရှိ ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ
၂ နှင့် ၁၁ ရှိရာ နေရာငါးခုအား လက်နက်
ကြီးများ အပါအ၀င် တိုက်လေယာဉ်များနှင့်
၃ နာရီ ကြာ မရပ်မနား ပြစ်ခတ်ပြီး ထိုးစစ်
ကြီး စတင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီ
သတင်း မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ကေအိုင်အေ တို့ မှ ဟူးကောင်း ချိုင့်ဝှမ်း အတွင်း
တပ်မတော်အား ပျောက်ကြား စစ်ဆင်ရေး
ဆင်နွှဲသွားမည်ဟု ကြေငြာပြီး မြေမြုပ်မိုင်းများ
ချ ခြင်း ၊ တပ်မတော် စစ်စခန်းတခုအား
မိုင်း အလုပ်သမားများ အား ဧပြီ ၁၂
နောက်ဆုံးထားပြီး ဒေသတွင်းမှ ထွက်ခွာရန်
ကြေငြာ ချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့
ပြီးနောက် အခုလို ထိုးစစ်ကြီး စတင်လိုက်တာ
မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် အဖွဲ့ က မိမိတို့ အဖွဲ့ဝင်
လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အား.အခုလို တိုက်ခိုက်
လိုက်ခြင်းဖြင့် မိမိတို့ အား တရားဝင် စစ်ကြေ
ငြာလိုက်ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တနိုငျးမွို့နယျထဲမှာရှိတဲ့ အောငျလော့ဒျရှာကို မွဈကွီး နား လတေပျစခနျးက တိုကျလယောဉျတှလောရောကျဗုံးကွဲ
Aung Htay Lin
ယနေ့ ၁၂/၄/၂၀၁၈ တနိုငျးမွို့နယျထဲမှာရှိတဲ့ အောငျလော့ဒျရှာကို မွဈကွီး
နား လတေပျစခနျးက တိုကျလယောဉျတှလောရောကျဗုံးကွဲ
ဖကျြဆီးခဲ့ရာ ရှာထိပျကုနျးပျေါတညျထားသညျ့ အောငျတျော
မူ ဘုရားအား ထိမှနျပွီး ထကျပိုငျးကြိုးကာ မွခေခဲ့ရပွီဖွဈပါ
ဘုရားဖွို သံဃာသတျ တဲ့ဗမာ့တပျမတျော အား မောငျးထုတျ
လီဒိုလမ်းတိုက် ပွဲပြင်းထန် အရပ် သားထိခိုက်
၁၃ ဧပြီ ၂၀၁၈
ယ နေ့နံနက် ၀၅း၀၀ နာရီ အချိန် မှစ၍ မရန် ရွာ
အလွန် ရာဘာခြံတွင် ဥ နေ သော မအလ ၂၉၈ တပ် နှင့်KIA တပ် ရင်း၁၁ မျိုးချစ် တို့ တိန် ရပ် ဇွပ် ဆမားလမ်းခွဲ အင် ဒန် ကျူကုန်းတွင် ထိပ် တိုက် ရင် ဆိုင် တိုက် ပွဲ ဖြစ် ပွားခဲ့ ကြောင်းသတင်းရရှိသည် ။
တိုက် ပွဲတွင် မအလ တပ် ဖက် အင် မတန် အထိနာ
လာခြင်းကြောင့်ဒုံဘွမ် ရွာ စာသင် ကျောင်းဘက် သို့
မအလ တပ် များ လက် နက် ကြီးချိန် ရွယ် ပစ် ခတ် ခဲ့ကြ
၏။ ပစ် ခတ် လိုက် သော လက် နက် ကြီးကျည် မှာ
ဦး ကျော် မြင့်နှင့်ဒေါ် ဖောင် ဂျုံထုဆမ် တို့ နေအိမ် ကို
ထိမှန် ကာ ယောက်ျားဖြစ် သူမှာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ပြီး
မိန်းမမှာ ပြင်းထန် ဒဏ် ရာရရှိသဖြင့်ရွာသားများမှ
မိုး ကောင်းနှင့်နမ္မတီး တို့မှ ရရာ နာ ရေးကူညီ ရေး
ကားအမြန် ရောက် လာရန် ဆက် သွယ် နေကြ ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည် ။
တပျ​မ​တျော​ မှ ဗုံးကွဲ ၍ ​အောငျ​​လော့ ​ကြေးရှာ မီး​လောငျ​ပုံ
at 4/13/2018 09:27:00 AM
တပျ​မ​တျော​ မှ ​နလေ့ညျ​ 11:00AM ​ကြျော​တှငျ​ ဗုံးကွဲ ၍ ထိမှနျ​ ပကျြ​စီး သှား​သော
​အောငျ​​လော့ ​ကြေးရှာ မီး​လောငျ​ပုံ
ထိုရှာသညျ​ KIA နှငျ့​ မညျ​သို့မြှ ဆကျ​စပျ​မှု မရှိ​သော
Kachin Media War
Voice Of Kachin. added4new photos.
ယနေ့နံနက် ၅:၃၀ အချိန်ခန့် ဗမာစစ်တပ်မှဒွမ်ဘုန်ကျေးရွာအတွင်းသို့လက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ဒွမ်ဘုန်ကျေးရွာနေ ဦးဇော်မြင့်ဦး၏နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းသို့ ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး အိမ်ရှင် ဦးအင်ရူရော်ဆန့် (ခ) ဇော်မြင့်ဦး (၄၂) နှစ် သေဆုံးပြီး ၎င်း၏ ဇနီး ဒေါ်ဖော်ဂျုန်ထုဆန် (၄၇) နှစ်မှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းကြားသိရပါသည်။
Wunpawng Myu Tsaw Kasa's post.
Wunpawng Myu Tsaw Kasa added5new photos.
Dap Bram Majan Shiga
13/4/2018 ya 5:00am ten kaw nna Lido lam Maran Kahtawng lai kanoi sun kata kaw but rawng nga ai Myen Tai hpyen 298 dap N-gun 50 jan hte tinang KIA Dap Dung-11 na myu tsaw ni Ting Rat Zup, Sama Lam Nbraw N Dang Chyu Kawng kaw man hkrum gasat poi byin nga sai lam na chye lu ai.....
Gasat poi hta Tai hpyen ni nau hkra machyi wa ai majaw Dumbung mare Hpaji jawng shingdu de myen ni sinat kaba gap bun nna Slg. ဦကျော်မြင့်ဦး hte Hpaujung Htu Sam yan La n ta kaw hkrat bun let madu wa gaw kalang ta si mat madu jan gaw hkala sawng taw nna mare masha ni Mogaung /Namti နာရေး Modo shaga kyin taw nga ai lam na chye lu ai.